Gịnị bụ MailChimp na otu o si arụ ọrụ: igodo ịghọta ya | ECommerce ozi ọma
Probably nụla MailChimp. Ikekwe ọ bụ n'ihi na i chere banyere iji ya maka ụlọ ahịa ịntanetị gị; ikekwe n'ihi na ị na-enweta ozi ịntanetị ebe, na ala, ha na-agwa gị na eji ngwá ọrụ a. Ma ọ bụ ikekwe n'ihi ihe ndị ọzọ.
MailChimp abụrụla ngwa dijitalụ kachasị amasị nke ọtụtụ iji zipu akwụkwọ akụkọ nye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị debanyere aha. Ma, ị̀ ma ihe ọ bụ? Olee otu o si aru oru? Ọ bụrụ na nke a bụ oge izizi gị, maọbụ ọ bụrụ na ịnwaleworị ya mana ọ doghị gị anya, ugbu a ị nwere ike ịghọta ya.
1 Gịnị bụ MailChimp
2 Ihe eji ya
3 Otu esi emepụta ozi MailChimp
4 Etu esi eji ngwa oru gi
4.1 Otu esi emepụta listi ịkpọtụrụ na MailChimp
4.2 Etu esi ebubata ndepụta nke ndị debanyere aha na MailChimp
4.3 Esi mepụta email
Gịnị bụ MailChimp
MailChimp bụ n'ezie ngwá ọrụ ị nwere ike iji mee mkpọsa ahịa email. Mgbasa ozi ndị a dị ezigbo mkpa n'ihi na ha na-enyere gị aka ijikọ ndị na-eso ụzọ gị niile, n'otu oge ahụ ị zigara onyinye gị, ego, ma ọ bụ naanị ozi-e nye ndị ahụ mejupụtara ndepụta ndị na-eso ụzọ gị.
Na mgbakwunye, ọ ghọrọ ngwa ọrụ dị ike, n'ihi na ị nwere ike ịmepụta, zipu ma mara mmetụta nke ozi ịntanetị gị bụ. Dịka ọmụmaatụ, were ya na ị zigara otu onye na-ekwu na azụmahịa ahụ emechila maka ezumike. Na mmetụta bụ 1%; Kedu ihe ọ pụtara? Na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ nweghị onye lebara email ahụ anya. Kama, izipu otu na-ekwu na ụlọ ahịa gị na-enye mbelata 50% na ihe niile; o doro anya na mmetụta ga-abụ 70% (ma ọ bụ 30, ma ọ bụ 100%, ị maghị). Ọ na-egosi na ọ ga-aga nke ọma.
N’ezie, ọ gaghị ekwe omume ịmata ma ozi email nke MailChimp ga-aga nke ọma ka ọ bụ na ọ gaghị, mana ọ ga-enye gị ọnụọgụgụ nke ga - enyere gị aka ịma ma ihe ị na - eme dị ire ma ọ bụ ọ bụrụ na ị ga - agbanwe iji kwalite azụmahịa gị nke ọma .
Ikwesiri ima nke ahu MailChimp nwere ụdị abụọ, nke nweere onwe ya na nke a kwụrụ ụgwọ ya. Akaụntụ efu na-enye gị ohere izipu ozi ịntanetị 12.000 kwa ọnwa, mana naanị kọntaktị 2.000. Maka akụkụ ya, akaụntụ ịkwụ ụgwọ nwere ọtụtụ uru (dịka ọmụmaatụ, ndị na - echekwa onwe ha, nke bụ izipu ozi ịntanetị na - akpaghị aka; ma ọ bụ ihe na-akpalite, nke na-ezo aka na izipu ozi ịntanetị banyere otu ihe omume), mana ọ bụrụ na ịgaghị ndị kọntaktị 2.000 ahụ, Ọ baghị uru ịkwụ ụgwọ ahụ maka uru ole na ole.
Ihe eji ya
N'ịga n'ihu na otu isiokwu MailChimp ahụ, ị ​​kwesịrị ịma na ngwaọrụ a nwere ọtụtụ ojiji. Ọ bụghị naanị na ọ na-elekọta ijikwa akwụkwọ ozi, mana ọ nwekwara ike ịlele ha.
Ọzọkwa, ọ bụghị naanị na ọ bara uru maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ọzọkwa maka azụmaahịa na-etinye ebe na ibe ha ebe ndị ọrụ nwere ike ịdebanye aha site na ịhapụ email ha. Ihe kpatara ya bụ na nnukwu nchekwa data a na-enye gị ohere ijikọ ndị ahụ niile. Mana ịme ya otu otu abụghị nke kachasị mma (ọ na - ewe ogologo oge yana kwa ozi ịntanetị nwere ike ịtụle na ha na - eziga Spam ma zipụ ihe niile ị zigara na folda ahụ (nke bụ eziokwu na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na - ahụ).
Mana ọ bụghị naanị nke ahụ, MailChimp ga - enyere gị aka ịmepụta mpempe akwụkwọ na blọọgụ gị, rube isi n'iwu antispam, mee nnwale, ma ọ bụ mee ka ọdịnaya ọdịnaya bufee. Ihe kariri nani ndi okachamara na ngwa a nwere ike iru.
N'echiche a, uru nke MailChimp Banyere nzipu ozi ọdịnala ha nọ:
Inwe ike ịlele nsonaazụ nke mkpọsa ọ bụla.
Mepụta ozi email ahaziri iche na nke mebere nke na-adọta uche.
Sochie nzaghachi nke onye nnata (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ha mepee email ahụ, ọ bụrụ na ha pịa njikọ ahụ, ọ bụrụ na ha ehichapụ ya ozugbo ...).
Otu esi emepụta ozi MailChimp
Tupu ịmalite iche echiche banyere otu ị ga - esi ziga ozi ịntanetị na ndị debanyere aha gị, ma ọ bụ ụdị mkpọsa ị ga - eme, ọ dị mkpa ka ị debanye aha ma mezue ihe niile Nzọụkwụ iji nweta akaụntụ MailChimp.
Iji mee nke a, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịga na peeji gọọmentị nke ngwa ọrụ ahụ, https://mailchimp.com/.
Ozugbo e, ị ga-pịa "Debanye aha Free". Tinye data gị n'ụdị, yana okwuntughe ị ga-eji. Nke a ga-ezitere gị email iji nyochaa ndebanye aha gị. Ga-pịa bọtịnụ "Mee ọ rụọ ọrụ".
N'oge ahụ, ihuenyo ọhụụ ga-emeghe nke ị ga-ejuputa na ozi ndị ọzọ: data nkeonwe, aha ụlọ ọrụ, adreesị, ọ bụrụ na iziga ihe, ọ bụrụ na ị nwere netwọkụ mmekọrịta ma chọọ ijikọ ha ... N'otu aka ahụ oge, ị ga-enweta email na-anabata gị ma na-enye gị akwụkwọ ntuziaka ka ị nwee ike ịghọta ngwa ọrụ ahụ, jiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi na, karịa ihe niile, mụta ụfọdụ aghụghọ nke iji ya.
Etu esi eji ngwa oru gi
Iji MailChimp nke ọma abụghị ihe gbasara awa, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị, n'ihi na ndụmọdụ kachasị mma anyị nwere ike inye gị bụ ịgụ ọtụtụ ihe maka ngwa ọrụ iji nweta ọtụtụ uru na ya. Yabụ, anyị ga-ahapụ gị isi eji ya yana otu ị kwesịrị isi mee ha.
Otu esi emepụta listi ịkpọtụrụ na MailChimp
Mepụta ndepụta ịkpọtụrụ dị mkpa n'ihi na, onye ị ga-eziga ozi ịntanetị gị mgbe ahụ? Ya mere, ị ghaghị iburu n'uche isi ihe a. Ime ya, Must ga-edo anya nke ọma gbasara ụdị onye ahịa ị ga - agwa. Dịka ọmụmaatụ, ịnweghị ike ịmepụta listi egwuregwu ụmụaka na ndị mmadụ ma ọ bụ ndị ọrụ na-enweghị ụmụaka.
Ozugbo ị nọ na MailChimp, ị ga-pịa na ngalaba Nsuso, nke bụ ebe e mepụtara ndepụta ahụ. N'ebe ahụ ị ga-ahụ, n'aka nri, obere bọtịnụ na-ekwu Mepụta Ndepụta. Gaba n'ihu.
Ugbu a ị ga-ejupụta nkọwa na ibe, ya bụ, aha ndepụta ahụ, ozi email ị ga-eji ziga na ndepụta ahụ, yana aha ga-abụ onye zitere ya. Mgbe ụfọdụ, ịnwere ike itinye ihe kpatara ha jiri debanye aha na ndepụta ahụ, yana buru n'uche na enwere ike ihichapụ ya.
Ozugbo emere ihe niile, pịa Chekwa na ị ga-enwe listi ịkpọtụrụ gị.
Etu esi ebubata ndepụta nke ndị debanyere aha na MailChimp
O nwere ike ịbụ na Nwere ndenye aha ndị debanyere aha na ịchọghị ka bulite ozi ịntanetị otu otu na MailChimp. N'okwu ahụ ị nwere ọtụtụ nhọrọ iji mbubata ha. Kedu? I nwere ike ime ya:
Site na Excel.
Site CSV ma ọ bụ ederede ederede.
Ma ọ bụ site na ngwa dịka Google Drive, Zendesk, Eventbrite ...
Esi mepụta email
Nweela ndepụta. Ugbu a aka mee email ichoro ndi ahu I debanyere aha ha na enweta. Iji mee nke a, ị ga-aga mkpọsa. Ma site ebe ahụ gaa na bọtịnụ dị n'aka nri, Mepụta Mgbasa Ozi.
Ugbu a, na ebe ọchụchọ ị nwere ike ịchọta ndebiri mkpọsa dị iche iche nwere ike ịba uru, dị ka ịnabata ndị debanyere aha ọhụrụ, ma ọ bụ icheta na ị gbahapụla ụgbọ ala na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Enwekwara daalụ ...
Ozugbo inwere ya, ị gha inye mkpọsa aha gị, yana ndepụta ịchọrọ ị nweta email ahụ. You kụrụ Malite.
Ọzọ, oge eruola imepụta email. Emere nke a na Imewe Imewe (n'akụkụ aka nri), ebe ị ga-ejupụta ozi achọrọ.
Ọzọ, ị ga-ahọrọ template maka email ahụ, nke ga-adabere na uto gị. Nwere ike ihuchalụ ya, yabụ na azụmaahịa gị na echiche ịchọrọ inye.
N'ezie, ị nwere ike ịhazi ederede, onyonyo, na ihe ọ bụla ịchọrọ.
Dị mkpa, gbakwunye mgbe niile ohere ịkagbu na ndenye aha, ebe ọ bụ ikike onye ọrụ. Na otu onyinye ọzọ, gbalịa na ihe niile dị n'asụsụ ziri ezi. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị na-agwa ndị ọrụ si Spain okwu, na Spanish (gụnyere n'okpuru); ma ọ bụrụ na ha bụ Bekee, ọ ga-aka mma ka ederede niile dị na Bekee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Email Marketing » Kedu ihe bụ MailChimp na otu o si arụ ọrụ
Esi ere na Amazon